Axmed Madoobe oo dalacsiiyay Taliyihii Ciidanka Afmadow ee ka biya diiday qorshihii DF - Jowhar Somali news Leader
Home News Axmed Madoobe oo dalacsiiyay Taliyihii Ciidanka Afmadow ee ka biya diiday qorshihii...
Axmed Madoobe oo dalacsiiyay Taliyihii Ciidanka Afmadow ee ka biya diiday qorshihii DF
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa maanta darajada Gaashaanle Dhexe u dalacsiiyay Taliyihii Ciidanka Daraawiishta qeybta Afmadow Mahad Islaam, kaasoo dhowaan sheegay in xubno ka tirsan dowladda Federaalka iyo Hey’adda Sirdoonka la soo xiriireen, si uu u afgambiyo degmada Afmadow, uguna wareejiyo dowladda Federaalka ciidamada uu taliyaha u ahaa.
Sarkaalkan ayaa ka soo muuqday muuqaal uu baahiyay Telefishinka Jubbaland, isagoo kaga hadlayay wada hadalo dhex maray xubno ka tirsan Madaxtooyada iyo NISA oo markii dambe lala hadalsiiyay Madaxweyne Farmaajo iyo Taliyaha NISA Fahad Yaasiin.
Waxaa uu Sarkaalkan soo bandhigay qoraal xawaaladeed oo ahaa lacag gaareysa $80,000 oo loo soo diray, si uu howsha u fuliyo, isla markaana qoyskiisa la geynayo dalka Turkiga, guri looga gadayo, lana siin doono haddii qorshahan fuliyo lacag gaareysa hal milyan oo dollar.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa markii uu Sarkaalkan dalacsiiyay waxaa uu ku amaanay sida uu isaga diiday shirqoolka iyo afgambiga la doonayay in lagu majo-xaabiyo amniga Afmadow oo dowladda Federaalka ay la damacsaneyd.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in wixii ay ku hadleen Sarkaalkan iyo dadkii la soo xiriiray uu si dhow ula socday “Waan heynaa codadkii lagu wada hadlayay, aniga intay wada hadlayeen waan dhageysanayey, waxyaabaha qaarkood macno ma sameyneyso in saxaafadda la geliyo waa ceeb Qaran weeye, laakiin intaas baa soomaali ugu filan waxa meeshaas ka jir”ayuu yiri.
Dhinaca kale Saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Jubbaland ayaa sheegay inay hayaan cododka Madaxweynaha, Taliyaha NISA iyo Xubinihii xiriiriyaha ahaa ee la soo hadlay sarkaalkan, inkastoo ay sheegeen in Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu diiday in la soo bandhigo.
Khilaafka dowladda Federaalka iyo Jubbaland sanadihii u dambeeyay marxalado kala duwan soo gaaray ayaa haatan maraya marxalad dagaal, iyadoo weli dowladda Federaalka ciidamo ku daabuleyso Gobolka Gedo.